Amonium Chloride, Benzalkonium Chloride - CHEM-PHARM
ụlọ ọgwụ na ihe ndị eji akwakọba ihe
Nnukwu ego Cetyl Trimethyl Ammonium Chloride ...
SJZ Chem-Pharm Co., Ltd. emi odude ke ufọt Shijiazhuang obodo, isi obodo nke Hebei n'ógbè. tumadi ire ere na kemịkal, ndị na-ahụ maka ọgwụ, anụmanụ na ihe ọkụkụ, wdg, na-enweta mpịakọta kwa afọ karịa dollar 30,000,000.
N'ịnọgide na mmụọ nke "ị attentiona ntị na ezi okwukwe, na-arụsi ọrụ ike na-agbanwe agbanwe ruo mgbe ebighị ebi", ụlọ ọrụ anyị eguzobewo mmekọrịta azụmahịa na nke enyi yana mba 60 na mpaghara ụwa.
Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka nkwado azụmahịa.
Ndị otu CCPIT
SINOSURE “AAA” EGO EGO
Akụkọ Companylọ Ọrụ Anyị
SJZ CHEM-PHARM CO., LTD sonyere ...
Site na isiokwu nke "China-Central and Eastern European Countries Local Cooperation. Ọhụrụ Ohere, Ubi Ọhụrụ ....
312020 / Ọgọst
Mgbasawanye Ọrụ nke SJZ CHEM-PHARM CO., LTD-A ...
Ọrụ Mgbasawanye nke SJZ CHEM-PHARM CO., LTD-Njem njem na Jiulongtan Na October 31, 2019, n'oge mgbụsị akwụkwọ ọlaedo a, SJZ CHEM-PHARM CO., LTD haziri ndị ọrụ iji mepụta ugwu na ọrụ mmepe na Jiulongtan Scenic Mpaghara ...
SJZ CHEM-PHARM CO., LTD sonye na Interna ...
SJZ CHEM-PHARM CO., LTD sonyeere International Economic and Trade Fair nke mpaghara Hebei. Site na isiokwu nke "China-Central na Eastern European Countries Local Cooperation, Ohere Ọhụrụ, Ubi Ọhụrụ, Oghere Ọhụrụ", nke atọ China-Central ...
Ndi oru puru iche Celebarate New Year '...
Ndị ọrụ pụtara ìhè Celebarate New Year's Eve na Sanya N'okpuru ndokwa ụlọ ọrụ ahụ nke ọma na nke ọma, na Disemba 28, SJZ CHEM-PHARM CO., LTD haziri ndị ọrụ pụtara ìhè gbagara Sanya, Hainan wee banye njem ụbọchị ise na col .. .
Shijiazhuang na ogbako azụmahịa nke Hungary Na November 20, Shijiazhuang Hungary ogbako ogbako emere na ulo nzuko Asia Pacific Hotel Conference. Tian Jiayi, onye isi oche nke Shijiazhuang Municipal Bureau of Commerce na ndị isi azụmaahịa gaa parti ...